अण्डा फुटाउँदा भित्रबाट निस्कियो अर्को अण्डा !
HOME » अण्डा फुटाउँदा भित्रबाट निस्कियो अर्को अण्डा !
डिसी नेपाल , २२ फाल्गुन २०७४
एजेन्सी। अस्ट्रेलियाको क्विन्ल्याण्डमा कुखुरा फार्म चलायरहेका एक किसानसँग यस्तो घटना भयो कि उनको होस उड्यो । स्कट स्टकम्यान नामका ती कृषकका अनुसार एक दिन अण्डा जम्मा गर्दा गर्दै उनले यस्तो अण्डा भेटे जो अन्य अण्डाभन्दा तीन गुणा ठूलो थियो । उत्सुकतावश उनले अण्डा फोरेर हेर्दा उनी चकित परे ।
अण्डाभित्रबाट अर्को अण्डा निस्कियो । यो अण्डाको तौल १७६ ग्राम पिथो जुन आम अण्डाको तुलनामा ३ गुणा बढी हो । यो अण्डा हातमा राख्दा हत्केलाभरीको थियो । स्टकले अण्डा फुटाउने बेला आफ्ना सबै स्टाफलाई बोलाएर देखाएका थिए । उनहिरुले अण्डाभित्रको पहेंलो भाग एकभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए तर भित्रबाट अर्को अण्डा निस्कियो ।